Mootummaan Ispeen bulchiinsa Kaatalaan diiguu labse - NuuralHudaa
Mootummaan Ispeen bulchiinsa Kaatalaan diiguu labse
Parlaamaan Bulchiinsa Kaatalaan juma’aa kaleessaa Ispeen irraa walaba bayuu erga labsee booda, muummichi ministera Ispeen Mariyaanoo Rahoy seeneetii biyyatti walgayii ariifachiisaa yaame. Haaluma kanaan Seeneetiin Ispeenis, muummicha ministiraatiif bulchiinsa Kaatalaan akka diiguuf taayitaa guutuu kenneef. yeroo muraasa booda Mr Rahooy paarlaamaa naannichaa jigsuudhaan Bulchiinsi Kaatalaan kan diigame ta’uu labse.
Mr Rahoy, Kaatalaan kallattiidhaan mootummaa jiddugalaa Ispeen jalatti kandeebite tahuu ibsuudhaan,Prezdaantii Bulchiinsa kaataluniyaa Karles Puigdemontii fi Itti aanaa isaa, akkasumas Hooggaanaa Poolisii naannichaa taayitaa irraa ari’uu beeksise. Itti aantuun muummee ministra Ispeen Ms Soraya Saez De Santamaria ammoo kallattiidhaan Kaatalaan akka hooggantuuf muudamte. Dabalataanis mootummaan Ispeen Naannichatti filannoon December 21/2017 akka geeggeefamuuf kan karoorfate tahuu gabaasni BBC ni mul’isa.
October 23, 2020 sa;aa 1:29 pm Update tahe